रणवीर नै किन रोजिन त सुबेक्षाले ? « LiveMandu
रणवीर नै किन रोजिन त सुबेक्षाले ?
१८ पुष २०७५, बुधबार १९:५१
पछिल्लो समय नेपाली फिल्ममा सुन्दरीहरु जोडिन थालेका छन् । मिस नेपाल लगायतका विभिन्न ब्युटी प्याजेन्ट मार्फत फिल्ममा आउनेको कमि छैन । प्रियंका कार्की, मलिना जोशी, सृष्टि श्रेष्ठ, अकेशा बिष्ट लगायत धेरै नाम छन् जसले नेपाली फिल्ममा प्रवेश गरिसकेका छन् । यसै लिस्टमा थपिएकी छिन् सुबेक्षा खड्का । सन् २०१२ मा मिस इन्टरनेशनल नेपालको टाइटल प्राप्त गरेकी सुबेक्षालाई पहिले फिल्म अफर नगरिएको होइन तर फिल्म ‘रणवीर’ मार्फत डेब्यु गर्दै छिन । नेपाली फिल्मको निर्माण शैलीमा परिवर्तन आएसँगै नयाँ अनुहारको खोजीको क्रममा सुबेक्षालाई धेरै प्रोपोजल आएको थियो तर उनले तात्कालिन समयमा फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइनन् उनि भिजेको रुपमा कान्तिपुर टेलिभिजनसँग आवद्ध भइन् ।
गतवर्ष सन् २०१८ को सुरुवात देखि फिल्म रणवीरमा जोडिएर नेपाली फिल्ममा प्रवेश गरेकी सुबेक्षालाई सम्भावना बोकेको अनुहारको रुपमा हेरिएको छ । लभ स्टोरी तथा एक्सन मिश्रित फिल्ममा सुबेक्षासँगै सुशील सिटौला, सुपुस्पा भट्ट, प्रशान्त ताम्राकार, टिका पहाडी, नरेश पौडेल, हरिहर शर्मा लगायतको अभिनय रहेको छ । कथा, पटकथा, संवाद तथा निर्देशन गोविन्द सिंह भण्डारीको रहेको फिल्मलाई गोमा बिष्ट थापा र दिपेन्द्र रेग्मीले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका छन् । यसमा फिल्ममा महेश पौडेलको छायांकन, कृष्ण भण्डारीको सम्पादन, चन्द्र पन्तको द्वन्द, रामजी लामिछाने र सुरेन्द्र बसेलको कोरियोग्राफी छ । फिल्म माघ १८ मा रिलिज हुदैछ ।
सुबेक्षा खड्का: मलाइ फिल्ममा आउँन मन नलागेको त होइन तर खोजिएको जस्तो फिल्म अफर आएँन । म मिस नेपालमा सेकेन्ड रनरअप भएसँगै मलाइ अफर राम्रै आएको थियो मैले धेरै मान्छेलाई पनि भेटँे । तर मलाइ चित्त बुझेन । मलाइ पहिले देखि नै फिल्ममा आउने ईच्छा थियो र मसँग काम गर्ने साथीसंगी सर्कलले पनि मलाइ भन्नु हुन्थ्यो तर सहि समयको पर्खाइमा थिए । रणवीरको अफर आएपछि स्टोरी सुने र टिम पनि चित्त बुझ्यो । यसैले यो फिल्म गरेकी हु ।
गोमा बिष्ट थापा: हामीले फ्रेस अनुहार खोजि रहेका थियौ, जस क्रममा सुबेक्षालाई भेट्यौ । उनलाई भेटेपछी सुनिएको कुरा लागत लाग्यो । उनले फिल्म नगर्ने भन्दा पनि राम्रो स्टोरी र टिम नपाएकी रहिछिन् । हामीले कथा सुनायौँ, पढ्न पनि दियौ । उनले फिल्म गर्छु भनेपछि काम सुरु भयो । एउटा सम्भावना बोकेको प्रतिभाको रुपमा पाए मैले सुबेक्षालाई ।
प्रधानमन्त्री देउवाको समुपस्थितिमा आठौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस–२०२२ सम्पन्न, कार्यक्रमको दूरदर्शनद्वारा प्रत्यक्ष प्रशारण
भारतीय राजदूतावास, काठमाडैंले नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको समुपस्थितिमा आज आठौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनायो । सो कार्यक्रममा बोल्दै